DEG-DEG: Kylian Mbappe Oo Laga Saaray Kulanka Manchester City & PSG Ee Caawa Iyo Pep Oo Dhoosha Ka Qoslaya - Laacib
HomeWararka Champions LeagueDEG-DEG: Kylian Mbappe Oo Laga Saaray Kulanka Manchester City & PSG Ee Caawa Iyo Pep Oo Dhoosha Ka Qoslaya
DEG-DEG: Kylian Mbappe Oo Laga Saaray Kulanka Manchester City & PSG Ee Caawa Iyo Pep Oo Dhoosha Ka Qoslaya
Paris Saint-Germain ayaa jug weyni soo gaadhay ka hor kulanka Manchester City ee caawa, waxaana aan ciyaartan ku jirin weeraryahanka reer France ee Kylian Mbappe oo dhaawac dartii aan u ciyaari doonin.
Kylian Mbappe oo ay da’diisu tahay 22 jir ayaa qayb ka noqday ciyaartoyda PSG ee safarka ku yimid Manchester iyagoo raadinaya in ay guul soo laabasho ah ka gaadhaan Man City oo lugtii hore 2-1 kaga soo badisay iyagoo garoonkooda Parc des Princes jooga.
Kulankii hore ee Paris ayuu Kylian Mbappe ciyaaray iyadoo shaki la gelinayo taam ahaanshihiisa, waxaana uu ahaa maqane jooga oo ciyaarta iska dhex-taagan, laakiin kooxdiisa ayaa xaqiijisay in haddana uu dhaawac kale soo gaadhay sidaasna uu kaga maqnaa ciyaartii horyaalka Ligue 1 ee Sabtidii ay 2-1 kaga adkaadeen Lens.
Paris Saint-Germain ayaa is-adkaynteedii ahayd in uu laacibkani taam u noqonayo ciyaartan ay soo dhamaatay xilli saacado koobani ka hadhsan yihiin waqtigii ay ciyaartu bilaabmi lahayd, waxaana uu Kylian Mbappe ka maqnaanayaa shaxda Mauricio Pochettino ee uu saacad iyo waxyar ka hor shaacin doono.
Sida uu qoray wargeyska Telefoot ee waddanka Faransiiska kasoo baxa, Kylian Mbappe ayaan ka mid noqon doonin ciyaartoyda safka hore ee garoonka lagu soo bilaabayo, waxaana uu fadhiyi doonaa kaydka maadaama aanu dhaawac ahayn.
Wargeyska ayaa sheegay, in xogto kooxda Paris Saint-Germain dhexdeeda ah ay warkan siiyeen xilli uu Mauricio Pochettino go’aamiyey ciyaartoyda ugu soo bilaabanaya kulanka iyo kuwa kaydka geli doona.
Sabere Desfarges oo ah saxafi ka tirsan wargeyyskan ayaa sheegay in Mbappe laga arkayay isagoo dhibaato ku dareemaya tababarkii kooxda ee maanta, taasina ay keentay in gebi ahaanba laga saaro shaxda garoonka kusoo bilaabanaysa balse uu kaydka ku jiri doono.
Arrintan ayaa dhaawac weyn ku ah PSG oo ay sugayso ciyaar adag oo ah in ay guul soo laabasho ah ka gaadho Manchester City oo ciyaartii hore 2-1 kusoo badisay.
Kylian Mbappe ayaa Paris Saint-Germain u dhaliyey xilli ciyaareedkan 37 gool oo siddeed ka mid ah ay yihiin tartanka Champions League.